दसैँ बिदामा पनि बैंकका शाखाहरु खुला, कुन बैंकको शाखा कहाँ र कति बजेसम्म खुला रहन्छ ?3Ghumti
दसैँ बिदामा पनि बैंकका शाखाहरु खुला, कुन बैंकको शाखा कहाँ र कति बजेसम्म खुला रहन्छ ?
बैंक/वित्त | 2019-10-04 13:12:00 |
दसैँको फूलपातीदेखि सार्वजनिक बिदा हँुदैछ । यस अवधिमा अधिकांश कार्यालयहरु बन्द रहन्छन् । तर बिदाको दिन पनि आम ग्राहकलाई निक्षेप झिक्न र राख्न सहज होस् भनी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले बिदाको दिन पनि आफ्ना काउन्टरहरु खुला राख्ने भएका छन् । हामीले वाणिज्य बैङ्कहरु कसको कुन शाखाले कति गते कति बजेसम्म बैंकिङ काउन्टर खुला राख्नेछन् भनेर जानकारी गराउन खोजेका छौँ । प्रायः बैकहरुको शाखा २ घण्टा देखि ४ घण्टासम्म खुला रहनेछन् ।
असोज २० गते पाटन शाखा ९ देखि १२ बजेसम्म र बर्दिबास, वीरगन्ज, दमौली, मिर्चैया र इटहरी शाखा ११ देखि २ बजेसम्म खुला रहनेछन् ।
असोज २२ गते न्युरोड १० देखि १ बजेसम्म खुला रहनेछ भने महेन्द्रपुल नेपालगन्ज ११ देखि २ बजेसम्म खुला रहनेछ ।
दरबारमार्ग शाखा असोज १८, १९, २०, २१ र २२ गते ९ देखि १२ बजेसम्म खुला रहनेछ । पुल्चोक १८, १९, २० र २१ गते १२ देखि ३ बजेसम्म खुला रहनेछ ।
उपत्यका बाहिर भने वीरगन्ज, भैरहवा, बुटबल, विराटनगर, पोखरा, जनकपुर १८ र १९ गते १० देखि १ बजेसम्म खुला रहनेछ । पोखरा लेकसाइड शाखा भने २२ गते १० देखि १ बजेसम्म खुला रहनेछ । यता नारायणगढ, नेपालगन्ज र धनगढी शाखा १८ गते १० देlख १ बजेसम्म खुला रहने बैङ्कले जनाएको छ ।
सरकारको निर्णयः ३२ जेठसम्म लकडाउन लम्ब्यो, असार १३ सम्म हवाई सेवा बन्द